सुशील दाईलाई खुला पत्र -TokyoNepal.com
Wednesday, 19 June 2013Nepal Time: 05:22 AMJapan Time: 08:37 AM
सुशील दाईलाई खुला पत्र राजेन्द्र जमरकट्टेल
आदरणिय दाजु जय नेपाल । देशको तरल अवस्था जिम्मेवार पार्टीको निर्णयक भूमिकामा र तपाई आर्दश प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रप्रतिका कति अडान आजको काँग्रेको जिवनजल भएको छ । सैद्धान्तिक स्खलन, संगठानीक भूक्षयमा केही हदसम्म भएपनि जाहात भोलेको अवस्थामा विचलनका शब्द चित्रण भएको गुञ्जायस होकी भान भइरहेको छ । तपाई सादा जीवन अडानमा नखुम्चीने पद्धति आजका दिनमा आदर्शका राजनीतिले क्रान्तिकारी, सामन्ती भनाउँदा नेताहरुलाई पनि खुलेर नाक ठाडो गर्न सकिरहेको छैनन् र प्रयासरत छन् । सुशील कोइरालालाई पनि त्यही हिलो एक पल्ट टेकाउन पाए आफू त्यही हिलोमा फूलेका उत्तम फूल मै मात्र छु भन्ने । चेतनाभया क्षेणिक स्वार्थ र दिर्घकालिन भत्ता र सुविधाको प्रलोभन उद्घोष गरिरहेको अवस्थामा मुख रसाउन पनि सक्छ ।
तपाईकै करेसावारीका आसेपासे लडुर देखाउँदै छन् होला मन पागल, इतिहास हुदै गणेशमान देखि नेल्शन मण्डलासम्म । पार्टीको जीवनलाई तपाई जस्ता आदेश निष्टा,भोग सुविधावाट टाढै राख्ने नेताको इतिहास भोलीकाहरुका लागि आर्दश बन्नदिनुस । संगठनको इतिहासमा बरु क्रान्तिकारी निर्णय लिनु अहिलेको आवश्यकता रामचन्द्र नभए शेरवहादुर नभए कुलवहादुर नभए भिमवहादुर नभए गगन सम्मले पुरा गर्नल सक्छन् । यो समय फड्को मार्ने बेला काँग्रेसको इतिहासमा हेर्दा उर्जाशिल युवा शक्तिमा आएको विचलन रोकथाम तपाईहरुकै निर्णय नपितम कार्यक्रमको कार्यान्वयनले निर्धारण गर्छ । तपाईलाई बुई चढाएर आफु भर्याङ उक्लिने प्रवृतिले र दुरदर्शावाट कसैको चेष्टा र पराकाष्टा परा हुन्छ भने पोकेको फल मुखमा परेपछि टर्रो र कोक्याउन पनि सक्छ त्यो तपाईलाई छोडिदिन्छु । यो प्रधानमन्त्रीय खेलमा रनभुलमा परेर काँग्रेसले गलत निर्णय गर्न नपुगोस । मेरो अपेक्षा सकिन्छ भने समयासान्दर्भिक, जनाजाति, महिला , युवाहरुको समग्र देशवासीले अनुभूति तगर्न सक्ने काँग्रेसको आदेशलाई अर्को एक दशकसम्म उदारहण बनाउन सक्ने उम्मेदवारको खोजी होस् । अन्यथा नलागे यो दौडमा तपाई योग्य भन्ने होइन सुवाउदैन र तपाई यात्रा सवार गराउनेहरुको आफ्नो जागिर पुरा गरिरहेछन् । अरुकै नियुक्तिमा अरुकै स्वार्थलाई दिन रातको जोखना हेरी बस्नेहरुवाट यो राष्ट्रले अपेक्षा गर्नु सोझै जनघात हो । राष्ट्रियता भनेको मोटो होइन जनविश्वास हो ।
हामी यही जनविश्वास जित्ने तपाईको आदर्श चाहिएको छ । नकि सिटौला जी अमरेसजीले हावा हालेको गाडीमा तपाईसंग प्रधानमन्त्रीत्व सवार चाहिएको छैन । एक दिन जनता स्वस्र्फूत त्यहाँ पुर्‍याउने छन् । समयको पर्खाइमा बस्नुस जनताको प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ । जनताको राष्ट्रपति बन्नु हुनेछ । शेरवहादुर देउवा र रमचन्द्र पौडेललाई प्रतिस्पर्धी गराएर तपाई स्थान सुरक्षित गर्ने वालालाई क्रान्तिकारी झडप हान्नुस् । तिमीहरु पनि होइनौ म पनि होइन, भिमवहादुर , कुलवहादुर हुन भनेर निर्णय लिनुहोस इतिहास र नेपाली जनताले सलोट गर्ने छन् । एकपल्ट जातियताको नाम लाग्न लागेको डढेलोले काँग्रेसी फाँटलाई केहीहदसम्म भएपनि राहात मिल्ला बरु । कि कसो सुशील दाजु । पक्कै आचकल रातपनि तपाईलाई सोचनिय रातहरु भएका होलान के गरौ ? कसौ गरौ के गर्दा उत्तम आदि इत्यादी ताईलाई मात्र हैन हामी कार्यकर्तालाई पनि निन्द्रा लाग्न छाडेछ । किनकी प्रधानमन्त्रीको विउले विभाजनको विउ नरोपस । नेता ज्यूहरुको स्वार्थ र मनोकांक्ष पूरा गर्ने निउँले कार्यकर्ताको सपना, भरोषा, विश्वासमा छेद नआओस । विश्वास छ यी अभिारा सुशील दाई पूरा गर्नु हुनेछ । र आगामी दिन काँग्रेसको अग्रस्थान, अग्र भूमिका रही रहने छ । आशामा बाँची रहेका छौ र बाचिरहने छौँ ।
उपचारका लागि नेपालका राष्ट्रपति टोकियोमा
नरेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा एनआरएन कान्साईको नयाँ कार्यसमिति
महामन्त्री सिंह नेपाल फर्किए
फुटबलमा ब्राजिलसंग हारेपछि जापानी टोलीको आलोचना
तुम धीँ जापानको बार्वे क्यु चल्दै
एनआरएन अध्यक्ष पदमा महासचिव शेर्पाको उम्मेदवारी (घोषणापत्रसहित)
एनआरएन क्युसुको निर्वाचन जुन ३० मा, के के छन नियम ?
जापानी कम्पनीले भियतनाममा रेलमार्ग निर्माण गर्ने
दार्चुला र कञ्चनपुरका लागि सरकारले छुट्टायो १ करोड रूपैयाँ
बामदेब भन्छन्,’जसले जति धम्की दिए पनि निर्वाचन हुन्छ’
बझाङका बादी समुदायलाई जापानवाट सहयोग
(अपडेट) राष्ट्रपति डा. यादव टोक्यो अस्पताल भर्ना, भोलिदेखि परिक्षण
किमले छोरी जन्माईन्
दूधमा दिशाको जीवाणु भेटियो
सुशील कोइरालालाई कोठा सार्न तानातान
चुनावका लागि स्विस सरकारद्धारा ९० करोड सहयोग
जापान सरकार भिसा नितीमा लचिलो हुने
जापानीसंग नक्कली विवाह गराउने गिरोह पक्राउ
जापानले बनायो द्रुतगतिको रेल
नेतृत्व छान्न नसक्दा जनसम्पर्क समिति जापानको अधिवेशन स्थगित
जापानमा संघर्ष गर्ने कलाबारे फुकुओका बस्ने नेपालीलाई जानकारी
गोविन्द मैनालीबारे जापानमा फिल्म बन्दै
के जापान आप्रवासी कामदार मैत्री बन्न सक्ला?
किशोरले ५० रुपैयाँका लागि ज्ञानेन्द्रलाई चप्पल हाने
प्रचण्डको हत्या गर्ने षडयन्त्र बनाइरहेका दुई पक्राउ
विश्वका सबैभन्दा बृद्ध जापानी किमोरोको निधन
भूपीगोविन्दको नेतृत्वमा जनसम्पर्क समितिको तदर्थ समिति
छोरीलाई नै श्रीमती बनाएर सन्तान जन्माएपछि….